Fayyisaa Leellisaa - Wikipedia
Fayyisaa Leellisaa (1990 - ) atileetii fiigicha dheeraa fiigu yoo ta'u dhalataa Oromoo ti. Fayyisaan Oromiyaa Shawaa Dhihaa Aanaa Jalduu magaalaa Jalduu keessatti bara 1990 dhalate.
Fayyisaan dargaggeessa maraatoonii sa'aatii 2:06 gaditti fiigee kan jalqabaa yoo ta'u kanas kan fiige Maraatoonii Rooterdaam 2010 irratti. Sa'aatin inni galmeessise inni gaarin 2:04:52 yoo ta'u kunis namoota maraatoonii saffisaan fiigan kudhan keessaa tokko isa godha.
Fayyisaan dorgommii jalqaba godhen Maraatoonii Dabliin bara 2009 irratti injifate. Itti aanses bara 2010 Maraatoonii Addunyaalessaa Shiyaamen irratti injifate. Fayyisaan Maraatoonii Shaampiyoonaa Addunyaalessaa irratti bara 2011tti nahaasii yoo fudhatu Olompiikii Riyoo kan 2016 irraatti ammoo meetii injifate. Olompiikii Riyoo 2016 irrattii dorgommii guyyaa dhumaa geggeeffamerratti, Fayyisaan yeroo xumuru harkasaa walirra qaxxaamursuun deeggarsa fincila Oromootif qabu agarsiisee, ajjeechaa fi gidiraa uummata Oromoorra ga'u mormeera. Gara Itoophiyaatti yoo deebi'ee lubbuusaarra balaa ga'u sodaachun gara biyya biraan deema jedhee ibsa gaazzexeessitootaf kenne.
Ibsaa gaazzexeessitootaf kenneenis akkas jedhe "Mootummaan Itoophiyaa uummataa koo ajjeesaa jira, kanaafis uummata koo wajjinan dhaabbadha. Maatin koo mana hidhaa keessa jiru, namoonni waa'ee dimookiraasii dubbatan ni ajjeefamu" 
2 Sa'aatii Gaarii
Dorgommii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Fayyisaa Leellisaa Maraatoonii Landan 2013 irratti
Fayyisaan dorgommii addunyaalessaa kan jalqabe bara 2008 yoo ta'u dorgommiin guddaa inni jalqaba godhe Shaampiyoonaa Qaxxaamura-biyyaa Addunyaa IAAF kan bara 2008 ti, kanarrattis dorgommii ol-adeemtotaatin sadarkaa 14ffaan xumure, kunis garee Itoophiyaa medaaliyaa meetii akka argattu gargaare. Dorgommii Addunyaa 10,000 kan Baangaloor irratti geeggeeffamerratti hirmaatee sa'aatii 28:35 galmeessun sadarkaa shanaffaan xumure.
Fayyisaan dorgommii ga'eessotaa bara ittaanu godhe, kunis Shaampiyoona Qaxxaamura-biyyaa Addunyaa IAAF kan 2009 irratti yoo ta'u sadarkaa 12ffaan xumuruun medaaliyaa nahaasii garee Itoophiyaa wajjin argate. Baruma sana Ebla keessa Kiresenti Siitii Kilaasik irratti hirmaachuf gara Yunaayitid Isteetis Niwuu Orliyaansi deeme. Meetira 10,000n Maarki Kiptootti aanee lammaffaa ba'uun sa'aatii gaarii 28:20 galmeessise. Ji'a Fulbaanaa keessa walakkaa Maraatoonii Rook inda Rool Virjiiniyaa Biich Haaf Maraatoonii irratti fiige. Dorgommii kanarratti sa'aatii 1:02:15 yoo galmeessu morkataasaa lammii Keeniyaaa Wiiliyaam Cheeboritti aanee lammaffaa ba'e. Fiigicha maraatoonii kan jalqabaa ji'a ittaanu Maraatoonii Dabliinirratti godhe. Dorgommii kana si'a lama mo'aatee kan ture Aleeksii Sokoloov daqiiqaa tokkoo fi walakkaan dursuun injifate. Sa'atin inni galmeessis 2:09:12 akka nama jalqaba maraatoonii fiigutti baayyee gaarii ture, garuu riikardii dorgommii kanaa sekendii 5f cabsuu dhabe.
Amajjii 2010tti Fayyisaan Maraatoonii Addunyaalessaa Shiyaamen irratti sana caalaa fooyyesse, achirrattis riikardii dorgommichaa kan waggaa tokkoof Saamu'eel Muturi Mugo qabame cabsuun sa'aatii 2:08:47 galmeessee maraatoonii guddarratti yeroo jalqabaaf moo'ate. Maraatoonii Rooterdaam irratti Sa'aatii kanarraa baayyee hirrisuun 2:05:23 xumure. Sa'aatin kunis Fayyisaa atileetii Itoophiyaa saffisaan fiigan keessa sadaffaa isa godhe, kunis Hayilee Gabrasillaasee fi Tsaggaayee Kabbadaatti aane jechuudha. Sa'aatin kun garuu Fayyisaan sadarkaa afraffaan akka xumuru godhuurraa hinbaraarre, sababiinsaas dorgommichi baayyee kan morkiin itti baayyate ture – Patrick Makau, Geoffrey Mutai, Vincent Kipruto hundi isaanii atileetota maraatoonii saffisaan fiigan 10 keessa galan. Maraatoonii Chikaagoo kan 2010 irratti ji'a Onkoloolessaa keessa kan fiige yoo ta'u dorgommicha sadarkaa sadaffaan xumure. Dorgommii kanarratti hanga 20 km warra dursan, Tsaggaayee Kabbadaa fi Saamii Waanjiruu, wajjin fiigaa yoo turu boodarra gara duubatti hafe. Ji'a itti aanu, Walakkaa Maraatoonii Deelii irratti jalqabarratti warra dursaa turan keessaa tokko yoo ta'u dhumarratti sadarkaa shanaffaan xumure.
Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa Addunyaa IAAF kan 2011 irratti, Fayyisaan garee Itoophiyaa kan medaaliyaa meetii fudhate keessaa ture. Achirrattis Fayyisaan sadarkaa kudha-torbaffaan xumure. Ji'a Ebla keessa, Maraatoonii Rooterdaam irratti kan hirmaate yoo ta'u sadarkaa torbaffaan xumure, moo'ataa dorgomichaa booda daqiiqa ja'a turee xumure. Shaampiyoonaa Addunyaa kan Atileetiksii kan 2011 irratti akka hirmaatuf kan filatame yoo ta'u dorgommicharrattis sa'aatii garii kan waggaa sanii galmeessun nahaasii fudhate, dorgommii kana 2:10:32 xumure.
Bara 2012 walakkaa maraatoonitiin haala gaaridhan jalqabe, Walakkaa Maraatoonii Hiwuusten irratti sa'aatii riikardii dorgommichaa ta'e 59:22 galmeessun injifate. Ji'a ittaanu Walakkaa Maraatoonii RAK kan dorgome yoo ta'u daqiiqaa lamaan hirrisuun shanaffaadhan xumure. Ji'a Bitootessaa keessa, Walakkaa Maraatoonii Niwuu Yoorki irratti sadaffaadhan xumure, kunis atileetii Itoophiyaa kan biraa Dirribaa Margaatti aane jechuudha. Dorgommii 10K Addunyaa kan Baangaloor irratti gara dhumaa duubatti hafuun sadarkaa afraffaan xumuree medaaliyaa dhabe. Garee Itoophiyaa kan Olompiikii 2012 irratti hirmaatef odoo hin filatamin hafe. Ji'a Adoolessaa keessa Walakkaa Maraatoonii Bogotaa irratti lammaffaa ba'e. Maraatoonii Chikaagoo kan 2012 irratti, Fayyisaan maraatoonidhan sadarkaa gaarii agarsiise – Tsaggaayee Kabbadaa wajjin hanga dhumaatti wal morkuun sa'aatii dhuunfaasaa saffisaa ta'e 2:04:52 galmeessun lammaffadhan xumure. Jalqaba 2013 irratti injifannosaa Walakkaa Maraatoonii Hiwuusten kabachiise. Ji'a tokko booda Walakkaa Maraatoonii RAK irratti afraffaa ba'e. Fayyisaan dorgommii qaxxaamura biyyaa Jaan Meeda moo'achuun dorgommii addunyaaf filatame.
Olompiikii Gannaa 2016 irratti, medaliyaa meetii kan injifate Fayyisaan, harkasaa lamaan walirra qaxxaamursuun deeggarsa mormii Oromoof qabu agarsiise. Mormiin kun sababa lafarraa buqqifamuu namootatin kan dhufe yoo ta'u Sadaasa 2015irraa eegalee ji'oota hedduuf geggeeffamaa ture. Uummanni yeroo mormii dhageessisaa ture mallattoo kana agarsisaa kan ture yoo ta'u Fayyisaan deggarsaasaa mallattoodhuma sana agarsiisun mullise. Sababa deggarsaa mormii Oromoof godheen, yoo biyyatti deebi'e ajjeechaa ykn hidhaan waan isa eeggatuf biyyatti akka hin deebine dubbate. Biyyatti yoon deebi'e balaa hamaatu na eegata jechuun gareen Itoophiyaa yeroo biyyatti deebi'u inni achuma Biraazilitti hafe.
Sa'aatii Gaarii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
10 km 28:06 Niwuu Deelii, Indiyaa 21 Sadaasa 2010
Walakkaa maraatoonii 59:22 Hiwuusten, USA 15 Amajjii 2012
Maraatoonii 2:04:52 Chikaagoo, USA 7 Onkoloolessa 2012
Injifannoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]
2009 Maraatoonii Dabliin Dabliin, Ayerlaandi 1ffaa Maraatoonii 2:09:12
2010 Maraatoonii Addunyaalessaa Shiyaamen Shiyaamen, Chaayinaa 1ffaa Maraatoonii 2:08:47
2010 Maraatoonii Rooterdaam Rooterdaam, Neezerlaandi 4ffaa Maraatoonii 2:05:23
2011 Shaampiyoonaa Addunyaalessaa Deegoo, Kooriyaa Kibbaa 3ffaa Maraatoonii 2:10:32
2012 Maraatoonii Chikaagoo Chikaagoo, USA 2ffaa Maraatoonii 2:04:52
2016 Olompiikii Riyoo de Jeneeroo, Biraazil 2ffaa Maraatoonii 2:09:54
↑ Ethiopia 'hero' runner gets asylum donations after Oromo protest sign, dhumarratti kan baname: Hagayya 22, 2016
↑ Atileeti Fayyisaa Leellisaa yaaddoo garaa na bultetti cabsee ba'ee, ummata kiyya waliin dhaabachuuf mormii agarsiiise jedhe, dhumarratti kan baname: Hagayya 23, 2016
Kitaaba Goonni Gosa Dhaala Amajjii 1, 2017
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Fayyisaa_Leellisaa&oldid=31406" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 13 Adooleessa 2019, sa'aa 08:14 irratti.